lalàn’ny fifidianana : Tsy natao hanilihana n’iza n’iza -
AccueilRaharaham-pirenenalalàn’ny fifidianana : Tsy natao hanilihana n’iza n’iza
Efa eny anivon’ny antenimiera roa tonta izao ny lalàn’ny fifidianana, izay efa nandrandrain’ ny maro ny handaniana azy, indrindra amin’ izao ankatoky ny fifidianana izao. Mazava rahateo ny teny izay nambaran’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier mikasika io lalàna io. “Tsy natao hanilihana an’ iza n’iza io lalàna io, fa natao hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenena, efa noraisina avokoa ny soso-kevitry ny rehetra” hoy ny fanazavany. Manamafy izany rahateo ny filohan’ny Antenimieran-doholona Rivo Rakotovao, izay nilaza fa “ny lalàna tsy natao ho an-dranona sy ianona, na koa hoe hevitry ny hvm ihany no natao tao dia tsy mety” hoy ny filohan’ ny Senat. Noho izany dia mikendry fifidianana madio sy mangarahara, ary eken’ ny rehetra ny fifidianana izay hotontosain’ny firenena amin’ity taona 2018 ity, nangina sy tankina ary resy lahatra ihany koa ny mpanohitra amin’ny fitadiavana tombontsoan’ny firenena, izay tanterahin ny mpitondra ankehitriny. Manamafy izany rahateo ny praiminisitra. “ Tsy hiveranako intsony hoe tsy lalàna notefitefena, na hamalifaliana olon-tokana, na antoko tokana ny lalàna izay naroso, fa lalàna mikatsaka ny tombontsoan’ny firenena “.
Lalàna haharitra sy hampiasaina amin’ny fifidianana ho avy tokoa no notanterahina, ary manana anjara asa amin’ izany ireo eo anivon’ny antenimieram-pirenena, nanipy teny noho izany rahateo ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta. “Tokony izay hahasoa ny firenena no jeren’ireo solombavambahoaka, ka tsy hikatsaka afa-tsy izay izy ireo ampandinihina ny lalàna , tsy misy kajikajy, tsy misy zavatra nafenina araka ny nambaran’ny hafa noho izany io lalàna io”. Noho izany afaka mandry ivohon’ny vato ny vahoaka Malagasy, satria tokoa dia tsy nisy ny nafenina mikasika io lalàna izay holaniana io, satria dia azo jerena ao amin’ny tranonkalan’ny primatiora izany lalàna izany, ary efa miparitaka eraka ny tambazotra sosialy ihany koa. Manomboka izao tokoa izany ny fangaraharahana amin’ ny resaka fifidianana, satria mbola tsy nisy ny lalàna izay hodinihina eny aivon’ny antenimiera roa tonta no nabaribary tahaka izao. Taloha tokoa aza ny mpanao gazety dia mbola sahirana mitady ireo lalàna izay hodinihina, saingy izao dia mazava ny lalao, ary afaka mahita izany avokoa ireo izay mety hirotsaka sy hifaninana amin’ny fifidianana izay ho avy.